China Gravity Racking orinasa sy mpanamboatra |Ampahafantaro
1, Gravity racking rafitra indrindra dia ahitana singa roa: static racking rafitra sy mavitrika mikoriana lalamby.
2, Dynamic mikoriana lalamby dia matetika fitaovana amin'ny sakany feno rollers, napetraka amin'ny fihenan'ny amin'ny halavan'ny rack.Miaraka amin'ny fanampian'ny hery misintona, ny pallet dia mikoriana avy amin'ny faran'ny entana mankany amin'ny faran'ny fandefasana entana, ary voafehin'ny frein.
Karazana racking: Fihetseham-batana
Fampiharana: hakitroky fitahirizana lehibe sy fihodinan'ny tahiry avo
①FIFO karazana racking
Rehefa nesorina ny pallet iray, ny pallet manaraka dia mandroso mankany amin'ny toerana fandefasana entana.Izy io dia mamela ny fihodinana voalohany amin'ny fivoahana (FIFO), mamela ny fivezivezena ny pallets avy amin'ny faritra iray mankany amin'ny iray hafa tsy mampiasa fitaovana fitantanana fitaovana.
Ny mpandraharaha sy ny forklift dia tsy mila miditra ao amin'ny racking ho an'ny fametahana pallet sy fampidinana entana, noho izany dia azo antoka kokoa amin'ny fiasana izany, ary mitondra fahasimbana kely kokoa amin'ny vondrona racking.
③ Fitehirizana avo lenta sy famokarana
◆Gravity racking dia vahaolana tsara indrindra amin'ny fampiasana ambony indrindra ny toerana fanatobiana entana, noho ny endrika lalina-lalana sy ny fidirana mora amin'ny pallets avy amin'ny rack faran'ny.
◆Mitombo be ny famokarana, satria kely kokoa ny fotoana handehanan'ny pallet manomboka amin'ny faran'ny entana mankany amin'ny faran'ny fanangonana.
◆Mitsitsy toerana fitehirizam-bokatra amin'ny alàlan'ny fanafoanana ny lalantsara, ka mitombo araka izany ny toerana fitehirizana pallet.
④ Famolavolana manokana amin'ny fiafaran'ny fanangonana sy fanangonana
Ny Inform dia manome endrika manokana amin'ny famenoana sy fanangonana ny faran'ny, izany hoe ny fanaovana ny faran'ny andry miaraka amin'ny grooves maromaro.Ny toeran'ny grooves dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny toerana misy ny pallet.Ny tanjona dia ny hanampy ny forklift ho mora kokoa amin'ny pallet, ary hisorohana ny fahasimban'ny taratra.
teo aloha: Drive amin'ny Racking
Manaraka: Push Back Racking